Забур 60 CARS - Nnwom 60 ASCB
Dawid “Miktam” dwom. Wɔde yɛ nkyerɛkyerɛ. Ɔtoo no ɛberɛ a ɔne Aram Naharanfoɔ ne Aram Sabafoɔ koeɛ na Yoab sane kɔkumm Edomfoɔ mpem dumienu wɔ Nkyene Bɔnhwa mu no.
1Ao Onyankopɔn, woapo yɛn, woabɔ yɛagu;
wo bo afu yɛn, nanso gye yɛn bio!
2Woawoso asase no na woapae mu;
toatoa deɛ abubuo no, ɛfiri sɛ, ɛrehinhim.
3Woama wo nkurɔfoɔ ahunu mmerɛ bɔne;
woama yɛn nsã a ɛma yɛtɔ ntentan.
4Nanso wɔn a wɔsuro wo deɛ, woama wɔn frankaa so
sɛ wɔntu ntia kuntun no.
5Gye yɛn nkwa na fa wo nsa nifa boa yɛn,
na ama wɔn a wodɔ wɔn no anya nkwa.
6Onyankopɔn akasa firi kronkronbea sɛ,
“Nkonim mu, mɛkyɛ Sekem mu,
na masusu Sukot bɔnhwa no.
7Gilead wɔ me, Manase wɔ me;
Efraim yɛ me dadeɛ kyɛ,
ɛna Yuda yɛ mʼahempoma.
8Moab yɛ me dwaresɛn,
Edom so na meto me mpaboa guo;
na meteam nkonimdie so gu Filistifoɔ so.”
9Hwan na ɔde me bɛkɔ kuropɔn a wɔabɔ ho ban no mu?
Hwan na ɔbɛdi mʼanim akɔ Edom?
10Ɛnyɛ wo, Ao Onyankopɔn, wo a woapo yɛn
na wone yɛn akodɔm ankɔ sa bio no?
11Boa yɛn tia ɔtamfoɔ no,
na ɔdasani mmoa nka hwee.
12Onyankopɔn wɔ yɛn afa yi, yɛbɛdi nkonim,
na ɔbɛtiatia yɛn atamfoɔ so.
ASCB : Nnwom 60